म तँलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने मेरा वचनहरूप्रति अलिकति अनिश्चितता वा लापरवाही समेत स्वीकार्य हुँदैन; तैँले यसलाई सुन्नुपर्छ र मान्नुपर्छ, र मेरा अभिप्रायहरूअनुसार तैँले अभ्यास गर्नुपर्छ। तँ सधैँ चनाखो हुनुपर्छ, र घमण्डी वा स्व-धर्मी स्वभाव देखाउनु हुँदैन; र तँभित्र बसेको पुरानो, प्राकृतिक स्वभावलाई हटाउनका लागि तँ सधैँ ममा निर्भर रहनुपर्छ। तैँले मेरो अगाडि सधैँ सामान्य स्थिति कायम राख्न सक्षम हुनुपर्छ, र तँमा स्थिर स्वभाव हुनुपर्छ। तेरो सोचाइ शान्त र स्पष्ट हुनुपर्छ, र कुनै पनि व्यक्ति, घटना, वा कुराबाट नियन्त्रित वा प्रभावित हुनुहुँदैन। मेरो उपस्थितिमा तँ सधैँ शान्त रहन सक्‍नुपर्छ, र मसँग निरन्तर निकटता र सङ्गति कायम राख्नुपर्छ। तैँले शक्ति र स्थिरताको प्रदर्शन गर्नुपर्छ, र तेरो गवाहीमा बलियो भएर उभिनुपर्छ; उठ् र मेरो पक्षमा बोल्, र अरू मानिसहरूले के भन्लान् भनेर नडरा। मात्र मेरा अभिप्रायहरूलाई पूरा गर्, र कसैलाई पनि तँ आफूलाई नियन्त्रण गर्न नदे। मैले तेरो लागि जे खुलासा गर्छु ती मेरो अभिप्रायहरूअनुसार पछ्याइनुपर्छ, र ढिलो गरिनु हुँदैन। तैँले अन्तस्करणमा कस्तो महसुस गर्छस्? तैँले सहज महसुस गरिरहेको छस्, छैनस् र? तैँले बुझ्नेछस्। मेरो बोझलाई विचार गर्दै, तँ किन मेरो निम्ति उठ्न र बोल्न सक्दैनस्? तँ स-साना योजनाहरूमा सहभागी हुन जिद्दी गर्छस्, तर म सबै कुरा स्पष्ट देख्छु। म तेरो टेको र ढाल हुँ, र सबै कुरा मेरो हातमा छ। त्यसोभए, तँ केसँग डराउँछस्? के तँ अति नै संवेगात्मक भइरहेको छैनस् र? तैँले जतिसक्दो चाँडो तेरा सबै संवेगहरूलाई त्याग्नुपर्छ; म संवेगमा काम गर्दिनँ, बरु धार्मिकताको अभ्यास गर्छु। यदि तेरा आमाबुबाले मण्डलीलाई लाभ पुग्ने गरी केही गर्दैनन् भने, तिनीहरू उम्किन सक्दैनन्। मेरा अभिप्रायहरू तेरो सामु प्रकट भएका छन्, र तैँले तिनीहरूलाई उपेक्षा गर्न सक्दैनस्। बरु, तैँले तेरो सम्पूर्ण ध्यान तिनीहरूमा केन्द्रित गर्नुपर्छ, र पूर्ण हृदयले तिनलाई पछ्याउन सबै कुरालाई पाखा लगाउनुपर्छ। तँलाई म सधैँ मेरा हातहरूमा राख्नेछु। सधैँ कायर बनेर तेरो श्रीमान् वा श्रीमतीको नियन्त्रणमा बस्‍ने नगर्; तैँले मेरो इच्छालाई लागू गर्न दिनुपर्छ।
विश्‍वास गर्! विश्‍वास गर्! म तेरो सर्वशक्तिमान् हुँ। शायद यसमा तेरा केही विचारहरू छन् होला, तर पनि तँ चनाखो हुनैपर्छ। मण्डली, मेरो इच्छा, र मेरा व्यवस्थापनका खातिर, तँ पूर्ण रूपमा समर्पित हुनुपर्छ, र तँलाई सबै रहस्य तथा प्रतिफलहरू स्पष्ट देख्नसक्ने बनाइनेछ। अब थप ढिलाइ हुनेछैन; दिनहरू अन्त्य हुँदैछन्। तैँले के गर्नुपर्छ? तेरो जीवनमा तैँले कसरी हुर्किन र परिपक्व हुन खोज्नुपर्छ? तैँले चाँडै आफूलाई मेरो लागि कसरी उपयोगी बनाउन सक्छस्? तैँले मेरो इच्छालाई अघि बढाउनको लागि कसरी सहयोग गर्न सक्छस्? यी प्रश्नहरूको लागि धेरै सोच र मसँग गहन सङ्गति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ममाथि भरोसा गर्, मलाई विश्‍वास गर्, लापरवाही कहिल्यै नबन्, र मेरो मार्गदर्शनअनुरूप काम-कुरालाई अगाडि लान सक्‍ने बन्। तँ सत्यद्वारा सुसज्जित हुनुपर्छ, र तैँले सत्यतालाई अझै धेरै पटक खानु र पिउनुपर्छ। प्रत्येक सत्यतालाई राम्ररी बुझ्नुअघि त्यसलाई अभ्यास गरिनुपर्छ।
के तँलाई अहिले तँसँग पर्याप्त समय छैन भन्‍ने लाग्छ? के तँलाई तँ भित्री रूपमा पहिलेभन्दा भिन्न छस्, र तेरो बोझ अहिले धेरै भारी भएको छ भन्‍ने लाग्छ? मेरा अभिप्रायहरू तँमाथि छन्; तेरो दिमाग स्पष्ट हुनुपर्छ, तीबाट बाहिर जानु हुँदैन, र मसँग सधैँ जोडिरहनुपर्छ। मसँग निकटता कायम राख, मसँग सङ्गति गर, मेरो हृदयप्रति विचारमग्न बन, र अरूसँगको सहकार्यमा सेवा गर्न सक्षम बन, ताकि मेरा अभिप्रायहरू तिमीहरूका लागि सधैँ प्रकट होस्। सधैँ समयमा एकदमै ध्यान दे! एकदम ध्यान! अलिकति पनि शिथिल नबन्; यो तेरो कर्तव्य हो, र मेरो काम यसभित्र बस्छ!
यो समयमा, तैँले थोरै बुझाइ प्राप्त गरेको हुनसक्छस्, र यो निकै अद्भुत रहेछ भनेर महसुस गरेको हुनसक्छस्। विगतमा तँसँग शङ्काहरू रहेको हुनसक्छन्, मानिसका अवधारणा, विचार र सोचहरूभन्दा बिलकुल भिन्न भावना, तर अहिले तैँले आधारभूत रूपमा बुझिसकेको छस्। यो मेरो आश्‍चर्यजनक कार्य हो, र यो परमेश्‍वरको पनि आश्‍चर्यजनक कार्य हो; तँ यसमा अघि बढ्दा नितान्त पूर्ण रूपमा जागेको हुनुपर्छ र पर्खेको हुनुपर्छ। समय मेरो हातमा छ; यसलाई बरबाद नगर्, र एक क्षणको लागि पनि शिथिल नबन्; समयको बरबादीले मेरो काम ढिलो हुन्छ र यसले तँमा मेरो इच्छालाई अवरोध पुर्‍याउँछ। तैँले तेरो सबै कार्य, चाल, सोच, विचार—तेरो परिवार, तेरो श्रीमान्, तेरा छोराछोरीलाई मेरो अगाडि ल्याउनुपर्छ। तेरो अभ्यासमा आफैमाथि भर नपर्, अन्यथा म रिसाउनेछु, र तैँले गुमाउने कुराहरू मूल्यवान् हुनेछन्।
सबै समयमा तैँले आफ्नो कदमहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, र मेरो वचनहरूभित्र नै निरन्तर रूपमा हिँड्नुपर्छ। तँसँग मेरो बुद्धि हुनुपर्छ। कुनै अप्ठ्यारोको सामना गरिस् भने, मेरो अगाडि आइज, र म तँलाई मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नेछु। समस्याको सिर्जना नगर् वा अव्यवस्थित रूपमा सङ्गति नगर्। यदि तेरो जीवनले कुनै पनि लाभ प्राप्त गर्दैन भने, यसको कारण भनेको तँसँग ज्ञानको कमी भएर र तैँले असल र खराब वचनहरूबीचको भिन्नता छुट्याउन नसकेर हो। तँलाई हानि नहुञ्‍जेलसम्म, तँ खराब अवस्थामा नहुँदासम्म, र पवित्र आत्मको उपस्थितिविना नभइञ्‍जेलसम्‍म, तैँले यो कुरा बोध गर्न सक्दैनस्, र त्यति बेलासम्म, एकदमै ढीला हुनेछ। अहिलेको समयले अत्यन्तै दबाब दिइरहेको छ, त्यसैले तँ जीवनको दौडमा अलिकति पनि रोकिनु हुँदैन; तैँले मेरो पाइलालाई नजिकबाट पछ्याउनुपर्छ। जब कुनै अप्ठ्यारो आउँछ, मसँग नजिकै रहँदै बारम्बार चिन्तनमा सहभागी बन्, र मसँग प्रत्यक्ष रूपमा सङ्गति गर्। यदि तैँले यो मार्गलाई समात्न सकिस् भने, यसले तेरो अगाडिको प्रवेशलाई सहज बनाउनेछ।
मेरा वचनहरू तँप्रति मात्रै लक्षित छैनन्; मण्डलीमा भएका सबै जनामा विभिन्न पक्षहरूको कमी छ। तिमीहरूले अझै बढी सङ्गति गर्नुपर्छ, तिमीहरूको आफ्नै आत्मिक भक्तिको समयमा स्वतन्त्र रूपमा खान र पिउन सक्‍नुपर्छ, र मुख्य सत्यताहरू बुझ्न र तिनलाई अभ्यासमा तत्कालै उतार्न सक्षम हुनुपर्छ। तैँले मेरा वचनको वास्तविकताको भावना बुझ्नुपर्छ: यसको चुरो कुरा र यसका सिद्धान्तहरूलाई बुझ्, र तेरो पकडलाई खुकुलो नबना। सधैँ चिन्तन गर्, र मसँग सङ्गति गर्, अनि बिस्तारै कुराहरूको खुलासा हुनेछन्। तँ एकैछिनका लागि आएर, र त्यसपछि, तेरो हृदयलाई परमेश्‍वरको अगाडि शान्त बनाउन नपर्खिकन, तँलाई केही हुने बित्तिकै बाधामा पर्ने गर्नु हुँदैन। तँ कुराहरूको बारेमा सधैँ अन्योलग्रस्त र अस्पष्ट हुन्छस्, र तैँले मेरो अनुहार हेर्न सक्दैनस्; त्यसैले, तैँले मेरो हृदयको स्पष्ट बुझाइ प्राप्त गर्न सक्दैनस्—र तैँले यसलाई अलिकति बुझिस् भने पनि, तँ अनिश्चित र अझै द्विविधामा हुन्छस्। जब तेरो हृदयलाई म पूर्ण रूपमा मेरो अधीनमा ल्याउँछु, र तेरो मन कुनै सांसारिक कुराहरूको बाधामा पर्न छोडेपछि र तैँले स्पष्ट र शान्त मनसहित प्रतिक्षा गर्न सकेपछि, म एकपछि अर्को गर्दै, मेरा अभिप्रायहरूअनुरूप तिमीहरूका लागि कुराहरू खुलासा गर्नेछु। मेरो निकट आउने यो मार्गलाई तिमीहरूले बुझ्‍नुपर्छ। तँलाई जसले प्रहार गर्छ वा सराप्छ, वा मानिसहरूले तँलाई जतिसुकै राम्रा कुरा उपलब्ध गराए पनि, यदि ती कुराले तँलाई परमेश्‍वरको नजिक आउनबाट रोक्छन् भने ती स्वीकार्य हुँदैन। तेरो हृदयलाई मेरो पकडमा रहन दे, र मेरो साथ कहिल्यै नछोड्। यस्तो प्रकारको निकटता र सङ्गतिले, तेरा आमाबाबु, श्रीमान्, बालबच्चा, अन्य पारिवारिक सम्पर्क, र सांसारिक उल्झनहरू बगेर जानेछन्। तैँले आफ्‍नो हृदयमा लगभग अवर्णनीय मिठासको आनन्द प्राप्त गर्नेछस्, र तैँले महकिलो र स्वादिलो स्वाद चाख्न पाउनेछस्; साथै, तँ मबाट वास्तवमै अविभाज्य हुनेछस्। यदि तिमीहरू यसरी अघि बढिरह्यौ भने, तिमीहरूले मेरो हृदयमा के छ भनेर बुझ्नेछौं। तिमीहरूले प्रगति गर्दै जाँदा तिमीहरूले तिमीहरूको मार्गलाई कहिल्यै गुमाउनेछैनौ, किनकी म तिमीहरूको मार्ग हुँ, र सबै मेरो कारणले अस्तित्वमा छन्। जब तिमीहरू सांसारिकताबाट मुक्त हुन सक्‍नेछौ, जब तिमीहरू आफ्‍ना भावनाहरूलाई त्याग्न सक्‍नेछौ, जब तिमीहरूले आफ्‍नो श्रीमान् र बालबच्चालाई छोड्न सक्‍नेछौ, जब तिमीहरूको जीवन परिपक्व हुनेछ, तब तिमीहरूको जीवन कति परिपक्‍व हुनेछ … यी सबै कुराहरू मेरो समयअनुरूप हुनेछन्। व्याकुल हुनुपर्ने आवश्यकता छैन।
तैँले सकारात्मक पक्षबाट प्रवेश लिनुपर्छ। यदि तैँले निष्क्रिय भएर पर्खिस् भने, तँ अझै पनि नकारात्मक नै भइरहेको हुन्छस्। तँ मसँगको सहकार्यमा सक्रिय हुनुपर्छ; परिश्रमी हुनुपर्छ, र कहिल्यै अल्छी हुनु हुँदैन। सधैँ मसँग सङ्गति गर् र मसँग अझ गहन सामीप्य आर्जन गर्। यदि तैँले बुझिनस् भने, शीघ्र परिणामहरूका लागि अधीर नबन्। म तँलाई बताउनेछैन भन्ने होइन; के हो भने, तँ मेरो उपस्थितिमा हुँदा तँ मप्रति निर्भर रहन्छस् कि रहँदैनस्, र मप्रतिको तेरो निर्भरतामा तँ सुनिश्‍चित छस् कि छैनस् भनेर हेर्न मात्रै मलाई इच्छा लागेको हो। तँ सधैँ मेरो नजिक रहनुपर्छ, र सबै कुरा मेरो हातमा छोड्नुपर्छ। व्यर्थमा पछाडि नहट्। केही समयका लागि अवचेतन रूपमा तँ मेरो नजिक आएपछि, मेरा अभिप्रायहरू तेरो लागि खुलासा हुनेछन्। यदि तैँले तिनलाई बुझ्न सकिस् भने, तँ वास्तवमै मेरो सम्मुख आउनेछस्, र तैँले मेरा अनुहारलाई वास्तवमै भेट्टाएको हुनेछस्। तँभित्र अझ धेरै स्पष्टता र दृढता हुनेछ, र तँसँग निर्भर हुने केही कुरा हुनेछ। त्यसपछि तँसँग शक्तिका साथै आत्मविश्‍वास पनि हुनेछ, र तँसँग अगाडि हिँड्ने बाटो हुनेछ। सबै कुराहरू तँकहाँ सजिलै आउनेछन्।
अर्को: अध्याय १०